Isu tinokuudza kuti tingapfeke sei pakushanya kuMorocco | Kufamba Nhau
Kupfeka sei muMorocco
ari nzendo dzekuMorocco dzinowanzo sanganisira kushamisika kwetsikaKunyangwe nhasi paine maguta anogashira mazana evashanyi pagore uye akachinjika zvakanyanya kune izvi zvinodiwa, senge Marrakech kana Casablanca. Nekudaro, kana isu tichienda kuenda kune imwe nyika uko isu tine tsika yakasiana zvakanyanya neyedu, tsika yechiIslam ine madhirezi ekupfeka, zvirinani kuti uwane pfungwa yezvatichawana.
Tichaona kupfeka sei muMorocco uye ndeapi akapfeka zvipfeko imomo. Isu tinoziva kuti hazvimanikidzwa kupfeka neimwe nzira, asi chokwadi ndechekuti kufunga nezvetsika yatiri nguva dzose chiratidzo chekuremekedza, saka ipfungwa yakanaka kuti uzvione.
1 Rudzii rwekupfeka rwekupfeka
2 Mapfekero atinoita
3 Zvipfeko zvechinyakare muMorocco
Rudzii rwekupfeka rwekupfeka
Chinhu chekutanga chatinofanira kuziva ndechekuti hapana mutemo unotitaurira rudzi rwehembe dzatinofanira kupfeka, ndiko kuti, hazvimanikidzwa kupfeka rudzi rwembatya asi zvinokurudzirwa. Rudzi rwembatya runowanzokurudzirwa nekuda kwezvikonzero zvakati wandei, chimwe chazvo ndechekuti zviri nani kuremekedza tsika dzenyika yatiri kuenda, nekuremekedza kuri nyore. Isu tinoda ivo kuti varemekedze mashandisiro edu uye tsika saka isu tinofanira kuita zvakafanana navo. Chimwe chikonzero ndechekuti kana tikapfeka zvine hungwaru, tinoenda tisingaonekwe uye tinodzivisa kukwezva zvakanyanya kana kutotarisirwa kana kutitaurira chimwe chinhu. Zvinogara zviri nani kuchengetedzeka nekudzivirira hunhu hwakadai nekuti tsika yavo haina kufanana neyedu.
Tinoziva kuti zvichienderana nenzvimbo yauri kuenda kunze kwetune zvakanyanya kana zvishoma zvichienderana nemadhirezi ako. Munzvimbo dzakaita seMarrakech kune ushanyi hwakawanda zvekuti hunoshandiswa kune ese marudzi echitarisiko, asi mumataundi madiki zvinogona kutaridzika kupfeka hembe dzakapfupika kana dzinodzidzisa zvakanyanya kwavari. Chinhu chinowanzoitika kupfeka masiketi marefu uye nemusoro usina tambo uye unovhara mapendekete. Kunyangwe ichiratidzika seyakawandisa kwatiri nekuda kwekupisa kwayinoita, chokwadi ndechekuti nerudzi urwu rwembatya tinodzivirirawo ganda uye kuve nechokwadi chekusave nekutsva munzvimbo dzakaita semapfudzi, saka ichiri mukana. Hatifanire kupfeka hembe dzechinyakare kunyangwe isu tichigona kugara tichifarira chiitiko.
Kana zvakadaro vhara musoro wako nechirafu chinonzi hijab hapana chikonzero. Kune vazhinji vakadzi veMoroccan avo mazuvano vanosarudza kusashandisa ichi sikafu saka hazvidiwe, kunyangwe zvakajairika kuchiona pane vakadzi munzvimbo dzakaita semataundi. Mumaguta hazvichawanzoitika nekuti ivo vakave vanokurudzirwa nedzimwe tsika. Nekudaro, kana isu tichida kunakidzwa neruzivo irworwo tinogona kuzviita nekutenga nhanho yakanaka. Zvakare, izvi zvinobatsira munzvimbo dzakaita segwenga nekuda kwezuva. Kune vanhu vazhinji avo parwendo murenje vanofunga kuitora kuti vanzwe kunge maBerbers uyezve kudzivirira matambudziko nezuva.
Imwe nyaya ine chekuita nemhando iyi yezvipfeko ndeyekuti kana kuchipisa muMorocco pfeka mwenje asi mbatya refu kudzivirira ganda kubva kuzuva uye kuitira kuti ziya risaome uye nekuchengetedza ganda kutsva kwenguva yakareba. Iyo zvakare inyaya inoshanda saka izano rakakura kuti varume nevakadzi vapfeke nguwo yechinyakare. Rudzi urwu rwezvipfeko runogona kutibatsira mumazhizha anopisa eMoroccan kuti tigare takadzikama tichidzivirira kutsamwa kwezuva.
Zvipfeko zvechinyakare muMorocco
KuMorocco kune dzimwe mbatya dzechinyakare dzinogona kwete kungonakidza sezviyeuchidzo kana uchiunza chimwe chinhu kumba, asi isu tinogona zvakare kuedza kunakidzwa netsika yavo. Mumwe wavo, iyo zvakare yakasununguka, ndiyo djellaba. Inguo refu iyo inowanzo kuperekedzwa nemabhuruku mune imwechete toni. Nguo yacho ine zvimwe zvakashongedzwa zvakafanana kana imwe vara uye dzimwe nguva ine hood ine tambo yakatambanudzwa inoenderana chaizvo. Inguo inogona kuwanikwa munzvimbo zhinji uye nemavara akasiyana. Icho chakareruka uye chakanakira kuti mwaka wezhizha utifukidze tisingapiswe nezuva.
El kaftan ndeimwe mhando yenguo inoshandiswa zvakanyanya nevakadzi muMorocco. Iyi inguo refu, yakatambanuka-ruoko iyo inogona kuoneka kumwe kunhu kuEast uye sezviri pachena yakatanga kuPersia. Iyo inguo yechinyakare inogona kushandiswa nemaitiro akareruka zuva nezuva uye nemagadzirirwo akajeka uye nemachira anodhura muzviitiko zvakakosha senge michato. Kaftans muMorocco ndezvevakadzi chete uye vamwe vanogona kudhura chaizvo pamachira avo akasarudzika, saka haagone kutengwa nguva dzose sezviyeuchidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Kupfeka sei muMorocco